Ọrụ 👟 | Gaa na Hultsfred
Kedu ihe ị chọrọ ime taa?
Hiking, ịkụ azụ, ịnyịnya ígwè, igwu mmiri ma ọ bụ gịnị mere na ị ga-eje ije Hultsfred The Walk na ịmụtakwu banyere Sweden kasị kpara ememme? Enwere otutu ihe ebe a - ma n'ezie ihe ruru gi!
Ụzọ ski gafere obodo Hagadal
Nlebanya Short electric ọkụ track
Dackeslingan dị n'akụkụ mkpọda ski Dackestupet. Ụzọ egwu a tụrụ mkpokọta ihe dịka kilomita 1,2 yana njem dị mfe yana nke siri ike karị. A na-agba egwu a na-enweghị uru
Golf disc ma ọ bụ frisbee golf dị ka a na-akpọkwa ya bụ egwuregwu eji diski (frisbee). N'ezie bụ 780 mita ogologo, mejupụtara 9 oghere
Ị na-achọ ọrụ jupụtara adrenaline? Gbalịa bọọlụ agba na Lönneberga. Paintball bụ nnukwu ọrụ maka gị nke nwere mmasị na adrenaline ma dabara onye ọ bụla
Nnukwu ọrụ na-atụrụ ndụ na nke ahụ nwekwara ike ịbụ ihe ịma aka. Si na ọdọ ma ọ bụ banye na osimiri na-enwu enyo. Jiri nwayọọ na-agba ịnyịnya!
Kporie ikuku di jụụ na oge dị jụụ n’elu mmiri mara mma na Hulingen. Iji jiri nwayọ na-efegharị n'elu mmiri, kwụrụ n'otu akụkụ osimiri
The Daisy ngere
Na Prästkragegärdet dị na Vena, e nwere ugwu dị mma maka ịgba èbè na ịnyịnya snow.
Na agbata obi "Slätten" na etiti Hultsfred ị ga-ahụ Slättenbacken, obere ugwu ziri ezi. E nwekwara ebe a na-eme achịcha na ọkụ.
Houselọ ịsa ahụ Virserum
Bathlọ ịsa ahụ Virserum bụ obere ụlọ ịsa ahụ nwere ọdọ mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ na-atụle 12,5 x 6 mita. Mmiri mmiri ahụ nwere omimi site na 0,9 ruo 1,5 mita.
Nzọ ụkwụ ụlọ na-efegharị n'obere okporo ụzọ. Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịnya okirikiri ebe dị anya, ị nwere ike ịtụ anya 17 km dị iche iche
Uwe ejiji okirikiri n'okporo ụzọ dị warara Flaten ruo Gårdveda
Uwe a na-agba ịnyịnya ígwè na Smalspåret Flaten - Gårdveda Ahụmịhe mara mma nke na-adabara ezinụlọ ahụ dum. N’ọdụ ọdụ Flaten, ị ga-ahụ ịnya uwe anyị. Enwere ebe a na-adọba ụgbọala
Den 7 mil långa och 891 millimeter breda Smalspåret Hultsfred-Västervik sträcker sig från de småländska skogarna i väster, förbi sjöar, små samhällen och jordbruk till
Site n'elu mkpọda slalom nke Dackestupet, ị ga-ahụ ọmarịcha echiche nke odida obodo Småland. N'ime njem na mkpọda ski, ị ga-enweta ihe mgbochi wuruwuru dị ka
Mpempe akwụkwọ Hagadals
Padel bụ egwuregwu raket nke enwere ike ịhụ dị ka ngwakọta nke tenis na skwọsh. A na-akpọ ya n'ụlọ ikpe nke nwere akụkụ abụọ nke ụlọ ikpe na-ekewa site na ụgbụ.